I-BPA yamahhala we-BPA engahambi kahle China Manufacturer
Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. [Guangdong,China] Uhlobo lwebhizinisi:Manufacturer Main Mark: Americas , East Europe , Europe , Oceania , West Europe , Worldwide Ngaphandle:71% - 80% Izikweletu:BSCI, ISO9001, CE, FDA, MSDS, Test Report Incazelo:Ukuhamba komugwa womugwa,I-Ceramic Travel Mug,Amakhemikhali amakhofi wekhofi
Home > Imikhiqizo > Umsila wamanzi angabonakali > I-BPA yamahhala we-BPA engahambi kahle
Le makhishi wekhofi wokuhamba eyenziwe kusuka ku-FDA evunyelwe futhi i-BPA mahhala-ebangeni lamakhemikhali okudla, ama-non-Pvc kanye nama-BPA-free, okungenayo i-toxic, akukho iphunga, ephephile futhi enempilo yomzimba womuntu. I izinkomishi ikhofi umgogodla ongekho, ongenalutho, olula ukuyisebenzisa futhi osebenza kahle kakhulu, ungayithokozisa ngephunga ngayinye yekhofi .-Kuwela phansi ubukhulu obuthatha isikhala esincane kakhulu esikhwameni, esikhwameni se-duffle noma e-suitcase. Le indebe yekhofi evuselelekayo ine-insulator yemvelo egcina izandla zakho zipholile ngenkathi uphuza ikhofi elishisayo noma ushokoledi oshisayo. Isikhumba sembopho esivulekile sivula futhi sivala kalula; kusiza ukunciphisa futhi kuvimbele noma yikuphi ukuthungula, amandla angu-12 oz omshisa obandayo noma oshisayo, ofanelekayo Okushisa: -40 ° C kuya ku-200 ° C, le indebe ekhokhwayo ikhofi ephathekayo ihambelana kahle nomuntu othanda ukuhamba, ukuhamba, ukuhamba, ukuhamba noma noma nini.Kuyisipho esiphoqisayo sesipho kubangani bakho noma kumndeni wakho.
Ukuhamba komugwa womugwa I-Ceramic Travel Mug Amakhemikhali amakhofi wekhofi Ukuhamba Kwamakheli Ukusetha Ukuhambisa amabhilidi wesobho Ukuhamba kweJars okubhekiselweyo Ukuhamba amabhodlela e-Liquid Ukuhamba ngeNdebe nge-Lid